August 16, 2016 – Wasaaradaha ganacsiga iyo maal-geshiga ee dawladaha Federaalka ee Soomaaliya iyo maalgashato Masaari ah ayaa maanta oo talaada ah waxaa magaalada Muqdisho uga furmay shir mudo asbuuc ah soconayo oo looga hadlayo arrimaha ganacsiga.
Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya rugta ganacsiga Soomaaliya, iyo Shirkadaha waaweyn ee galka iyo rugta ganacsiga Masar iyo midowga maalgeshatada waddankaasi iyo ganacsato kale oo labada dal ka socda.
Wasiirka Ganacsiga dawlada federaalka ee Soomaaliya, Mudane C/rashiid Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay in shirka noocan oo kale ah uu macno wayn u leeyahay shacbiga labada dal iyo ganacsatadooda ee uu ganacsiga ka dhaxeeya.
Safiirka dalka Masar u fafdhiyo magaalada Muqdisho Waliid Maxamed ayaa isna dhankiisa muujiyey sida uu uga faraxsan yahay bogga cusub ee u furmay ganacstada labada dal.
Xubno ka kale socday ganacsatada labada dal ayaa iyaguna ka hadlay goobta uu shirka ka socdo, waxa ay ku soo bandhigeen alaabo samples-ah (Nuqulo) kamida badeecooyinka ay ka ganacsadaan.
Duulimaadyada Tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi oo Maanta si Rasmi ah u Bilaawday (VIDEO) March 29, 2017
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Xarunta Villa Somalia ku Qaabilay Wasiirka Arimaha Dibedda ee Dalka Ingariiska (SAWIRRO) March 15, 2017
Soomaaliya oo Mar Labaad Codsatay in Lagu soo Wareejiyo Maamulka Hawadeeda February 17, 2017